ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်း Archives ⋆ Lovely Myanmar
ကျဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ ဆေးတပ်သား ဆရာဝန်လေးရဲ့ ကြေကွဲဖွယ် ကဗျာ တစ်ပုဒ် …
By Aung Aung on Friday, March 22, 2019
ဂု ဏ်သတ္တိမပြည့်တဲ့ သုတ်ပိုးတွေဖလှယ်ပြီး မွေးကတည်းက လူဖြစ်ဖို့တစ်ဆင့်လိုနေတဲ့ သန္ဓေကြောင်တွေရဲ့ပေါ်ပြူလာအနုပညာခွေးဝဲစား သတင်းတွေကို ခဏကျော်ခွပြီး အောက်ကကဗျာလေးကို တစ်လုံးစီ တစ်ကြောင်းစီ ဆုံးတဲ့အထိ ဖတ်ပေးပါလား” ဆိုပြီး အဆိုတော် လင်းလင်းက ပြန်လည်မျှဝေထားတဲ့ ဆေးတပ်သားလေးရဲ့ ကဗျာ လေး ပါ ကျဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ ဆေးတပ်သား ဆရာဝန်လေးရဲ့ ကဗျာ တဲ့ဗျာ။ ကဗျာကိုဆုံးတဲ့အထိ မာန်တင်းပြီးဖတ်ရတယ်။အရမ်းလဲ ဝမ်းနည်းရပါတယ်။ *** ပုံရော စာရော မူရင်းကို ခရက်ဒစ်ပေးပါတယ် ခင်မျာ*** ””သတ္တမမြောက် သုဒ္ဓကိန်းတစ်လုံး “” ခန္တာကိုယ်မှာ အရှက်လုံရုံ အဝတ်တစ်စုံ ဖုံးထားတယ် ….ကိုယ့်အသက်အတွက် လက်တစ်ဖက်မှာ သေနတ်တစ်လက်…. ကျောထက်မှာ အိုးစားဖက်တွေ အတွက် အသက်ရှင်ရေး မျှော်လင့်ချက်တွေ စုပြုံထမ်းပိုး ပြီး ခြေတစ်လှမ်း လှမ်းလိုက်တယ် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် …
ဆေးအသုံးလွန်ပြီး အိပ်ရာထဲမှာပဲ ဖက်လျက်သေဆုံးနေခဲ့တဲ့ စုံတွဲ
By Aung Aung on Sunday, March 3, 2019
မစ်ရှဲလ်အဗီလာနဲ့ ခရစ်ရှန်ကန့်တို့ဟာ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် နယူးပေါ့တ်ဘိခ်ျမြို့မှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်မနက်မှာတော့ မစ်ရှဲလ်နဲ့ ခရစ်ရှန်တို့စုံတွဲရဲ့ အလောင်းကို မိသားစုဝင်တွေဟာ မစ်ရှဲလ်ရဲ့ အခန်းအိပ်ရာထဲမှာ အတူယှဉ်တွဲပြီး သေဆုံးနေတာ တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ ဆေးအလွန်အကျွံသုံးစွဲပြီး သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ မစ်ရှဲလ်ဟာ သေဆုံးချိန်မှာ အသက်(၂၃) နှစ်သာ ရှိသေးပြီး ခရစ်ရှန်ကတော့ အသက်(၂၀) ပါ။ မမျှော်လင့်ပဲ အရာရာပြီးပြည့်စုံပြီး ပျော်ရွှင်လျက်ရှိနေတဲ့ စုံတွဲဟာ ရုတ်တရုတ်ကြီး သေဆုံးသွားတဲ့အတွက် မိသားစုဝင်တွေကတော့ နှမြောတသဖြစ်လျက် ရှိနေပါတယ်။ အောက်တိုဘာ(၁၄) ရက်နေ့ ညပိုင်း သူတို့မသေဆုံးခင်အချိန်မှာ မစ်ရှဲလ်တို့စုံတွဲဟာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ပါတီပွဲမှာ ရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ အအေးမိနေတာကြောင့် ထိုညမှာ ပဋိဇီဝဆေးတွေလည်း သောက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ပါတီပွဲပြီးလို့ အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ ညပိုင်း(၁၂း၃၀) လောက် ဖြစ်နေပါပြီ။ …
လူထောင်ချီရှိနေတဲ့ ဘောလုံးကွင်းအလယ်မှာ ကစားနေရင်း လဲကျပြီး ချက်ချင်း သေဆုံးသွားကြတဲ့ ကမ္ဘာ့ကျော်ဘောလုံသမားကြီးများ
By Aung Aung on Saturday, March 2, 2019
သေခြင်းတရားဆိုတာ လူတွေမြန်ပါတယ်ပြောကြတဲ့ အမြန်ဆုံးကားတွေ တရွေ့ရွေ့ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အချိန်ထက်တောင် မြန်ဆန်တာ ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တကယ်ဖြစ်ပျတ်သွားမှ အမှန်တယ်ဆိုတာ သိကြပါတယ်။ အားကစားသမားတွေလဲ အားကစားလုပ်လို့ အသက်ရှည်ကျန်းမာတယ်ဆိုတာ သိပ်တော့မမှန်ပါဘူး။ တစ်ချို့ဘောလုံသမားတွေဆို ဘောလုံကစားနေရင်းနဲ့တောင် သေဆုံးသွားတတ်တာတွေရရှိတတ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကျော်ဘောလုံသမားကြီးတွေလဲ လူထောင်ချီရှိနေတဲ့ ဘောလုံးကွင်းအလယ်မှာသူတို့အမြတ်တနိုး ချစ်ခင်ရတဲ့ ဘောလုံးကို ကိုယ်တိုင် ကစားနေရင်း လဲကျပြီး ချက်ချင်း သေဆုံးသွားကြပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ဘောလုံးကစားနေရင်း လဲကျပြီး သေဆုံးသွားကြတဲ့ ကမ္ဘာ့ကျော်ဘောလုံသမားကြီးတွေရဲက ဗီဒီယိုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုလိုဖော်ပြပေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကိုယ်အနားမှာ ရှိတဲ့လူတွေလဲ ကိုယ်ကို ဘယ်အချိန်မှ ခွဲခွာသွားမယ်ဆိုတာ မသိတာကြောင့် လူတိုင်းကို စေတနာနဲ့ ဖော်ဖော်ရွေရွေဆက်ဆံတတ်စေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။source: the sun credit – Myanmarload Unicode သခွေငျးတရားဆိုတာ လူတှမွေနျပါတယျပွောကွတဲ့ အမွနျဆုံးကားတှေ …
ကမ္ဘာကျော်သွားခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ (သို့) ရင်နင့်ဖွယ် ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုအကြောင်း
By Aung Aung on Wednesday, February 27, 2019
၁၉၈၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်မှာ ကိုလံဘီယာမှာရှိတဲ့ နီဗာဒို ဒယ်လ်ရဇ် (Nevado del Ruiz ) မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တော့ ကျောက်ရည်ချော်ပူရည်တွေဟာ ရွာပေါင်း ၁၃ ရွာနဲ့ လူ အသက်ပေါင်း ၂၃၀၀၀ ကျော်ကို ပျက်ကြွေစေခဲ့တယ်။ ဒီမီးတောင်က ချော်ရည်က လာဗား (lava)လို့ခေါ်တဲ့ ကျောက်ရည်ပူ အမျိုးအစား မဟုတ်ပဲ လာဟာ (lahar) လို့ခေါ်တဲ့ ရွှံ့ရောကျောက်ရည်တွေဖြစ်ပြီး အင်မတန်မြန်ဆန်တဲ့အရှိန်နဲ့ အလွာလိုက် တဟုန်ထိုးဆင်းလာတာဖြစ်တယ်။အဲဒီ ရွှံ့လွှာကြီးဖြတ်အသွားမှာ အပြင်ဘက်က ဆောင်းရာသီ ရေခဲမှုန်တွေနဲ့ တွေ့ပြီး ကျောက်ရည်တွေဟာ သက်ရှိသက်မဲ့ အကုန်ကို ကွန်ကရိနဲ့မံထားသလို အေးခဲသွားစေတယ်။ အဲဒီထဲက အပြစ်မဲ့ သားကောင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အသက် ၁၃နစ်အရွယ် Omayra Sánchez Garzón …
မိသားစုကို မီးဘေးက ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ကိုယ်တိုင် မီးခိုး မွှန်ကာ သေဆုံးခဲ့ရှာတဲ့ကလေးငယ်
By Aung Aung on Tuesday, February 26, 2019
ကလေးငယ်တစ်ဦးဟာ မိခင်နဲ့ညီမဖြစ်သူကို မီးလောင်သေမယ့်ဘေးကနေကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မကောင်းစရာက ကလေးငယ်ဟာ အကြောက်လွန်ပြီး သူ့အိပ်ခန်းဆီပြန်ပြေးအသွား မီးခိုးမွှန်ကာသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့မိခင်ကတော့ အသက်(၂၆)နှစ်အရွယ် ၀ှစ်တနေဂျွန်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမက အသက်(၂)နှစ်အရွယ်သားလေး ဒီဂျေနဲ့ (၅)လသမီးအရွယ် နိုင်လာတို့နဲ့အတူ ဆိုဖာပေါ်မှာ အိပ်မောကျနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှာပဲ အိမ်တွင်းမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ အပူပေးကိရိယာ ပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မီးခိုးအချက်ပြတဲ့စက်က အလုပ်မလုပ်တော့တာကြောင့် မီးလောင်နေမှန်းမသိခဲ့ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီဂျေက နိုးလာပြီး မိခင်ဖြစ်သူကို အော်ခေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ ၀ှစ်တနေလည်း နိုးလာခဲ့ပြီး ဒီဂျေရဲ့လက်ကိုဆွဲ၊ နိုင်လာကိုပွေ့ချီပြီး အိမ်ရှေ့တံခါးပေါက်ကနေ အပြင်ပြေးထွက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ၀ှစ်တနေက တံခါးပေါက်က သော့ကိုလှည့်ပြီးဖွင့်ဖို့လုပ်နေတုန်း ဒီဂျေကိုလက်ကခဏလွှတ်ထားခဲ့ရာမှာ ဒီဂျေဟာ အကြောက်လွန်ပြီး ငိုယိုကာသူ့ရဲ့ အိပ်ခန်းထဲကိုပြန်ပြေးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ ၀ှစ်တနေက မီးခိုးငွေ့တွေကြားထဲ ငိုပြီးအိမ်ထဲပြေးဝင်သွားတဲ့ ဒီဂျေနောက်ကိုလိုက်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့ပေမယ့် နာလာရဲ့ဦးရေခွံတွေဟာ မီးလောင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့် ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဂျေကိုချက်ခြင်းသွားမခေါ်တော့ပဲ …
နောက်ဆုံးအချိန် မတိုင်ခင်လေးမှာ ရိုက်ယူခဲ့မိတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးများ
By Aung Aung on Saturday, February 23, 2019
သေခြင်းတရား ဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ယုံကြည်ဖို့ ခက်ခဲကြတယ်။ ဘာကြောင့် ခက်ခဲသလဲ ဆိုရင် နေ့ရက်တိုင်းကို ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ စိတ်ဆိုး ဒေါသတွေ၊ ပူပန်မှုတွေ၊ စိတ်ချမ်းသာမှု တွေနဲ့ ခံစားရင်း ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့ အတွက် သေခြင်းတရား ကိုတစ်ခါတစ်လေမှာ မေ့လျော့နေ တတ်တယ်။ သေခြင်း ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့နားမှာ အမြဲတမ်း တရစ် ဝဲဝဲနေတယ်တယ် ဆိုတာ ဒီပုံလေးတွေ ကြည့်ရင် ရှင်းသွား ပါလိမ့်မယ်။ (၁) ရှီနီယာ အစ်ဂ်နာတီဗာ ဆိုတဲ့ ၁၇ နှစ်အရွယ် ရုရှားသူလေးဟာ သူများတွေထက် ထူးပြီး အန္တရာယ်များတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ ဆယ်လ်ဖီ ရိုက်ရတာကို နှစ်သက်သူပါ ။ ပုံထဲမှာတော့ သူမဟာ မြေပေါ်ကနေ …
ခိုတွေကြောင့် ဆုံးပါးသွားတဲ့ မောင်သူရအောင် ( ၆ နှစ် )
By Aung Aung on Wednesday, February 20, 2019
ဒီနေ့မနက်မှာပဲ မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့(၆)နှစ်သား ကလေးငယ်လေး ရက်လည်ဆွမ်းကျွေးသွားဖြစ်တယ် ကလေးက ရုတ်တရက်ကြီးလို ရေချိုးနောက်ကျရာက အပြင်းဖျား ဆေးရုံရောက်တယ်လေ အဲ့ကနေနောက်တရက်ပဲ ဆုံးသွားရှာတယ် နောက် သိလိုက်ရတာ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်တာတဲ့ ဘာကြောင့်ဖြစ်မှန်းမသိ မိဘတွေမှာ..ဇဝေဇဝါပေါ့ ရုတ်တရက်ဘာဖြစ်ပါလိမ့်ပေါ့ ကလေးဆေးရုံက ဆရာဝန်ကြီးကမေးတယ် ခင်ဗျားတို့ အိမ်မှာ ငှက်တွေများမွေးသလားပေါ့.. မမွေးပါဘူးပေါ့..မိဘတွေကလည်း ဘာလို့လဲဆရာဆိုတော့ ကလေးမှာဘက်တီးရီးယားတွေကူးစက်ခံထားရတယ် အတွင်းကလီစာတွေလည်းထိခိုက်ထားတယ် တဲ့လေ နောက်မှ..သူ့အဖေက စဉ်းစားလာမိတယ် အားပါးပါး… နေနေတဲ့ တိုက်ခန်း(၄)လွှာဝရံတာ မျက်နှာကြက်အမိုးအောက်မှာ ခိုတွေ..ခိုတွေ.. အသိုက်ဖွဲ့နေကြတာ မြင်မကောင်းဘူး ခိုချေးတွေက လက်ရန်းဘောင်တွေမှာ နင်းကြမ်း.. နေလာတာ (၂)နှစ်ကျော်ပြီတဲ့လေ.. ကလေးက ခနခန ခေါင်းကိုက်တယ် ဗိုက်နာတယ်ပြောပါတယ် မိဘတွေက ကျောင်းမတတ်ချင်လီု့ ဂဂျီဂဂျောင်လုပ်တယ်ထင်နေခဲ့တာလေ..အခုမှ သိတော့တယ် ကလေးက သူဖြစ်နေတာကို သူ မပြောပြတတ်တာကိုး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသလို နောက်ထပ်လည်းမဖြစ်စေရအောင် …
လူနာ ကုတင်နံပါတ် (၁၉)
By Aung Aung on Tuesday, February 19, 2019
*လူနာ ကုတင်နံပါတ် (၁၉)* အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါသည်တစ်ဦး သားဖွားဆောင်ထဲ ရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းက အိုးပူပူထဲ ပေါက်ပေါက် ထည့်ဖောက်လိုက်သလို သားဖွားဆောင်တစ်ခုလုံး ချက်ချင်းပေါက်ကွဲသွားခဲ့တယ်။ အစည်းအဝေးတုန်းက ဆေးရုံအုပ်ရှေ့မှာ ဘာမှမဟရဲခဲ့ကြပေမယ့် အစည်းအဝေးအပြီးမှာ နပ်စ်တွေက အချင်းချင်းဝိုင်းအုံဖွဲ့ကြပြီး “ရောဂါကူးခဲ့ရင် ဘယ်သူတာဝန်ယူမလဲ?” လို့ငြင်းခုံခဲ့ကြတယ်။ ဆရာဝန်တစ်ချို့ကတောင် “လူနာသုံးတဲ့ ခွဲစိပ်ကိရိယာတွေ၊ အိပ်ရာခင်းတွေကတစ်ဆင့် တစ်ခြားလူနာတွေကို ပြန်ကူးစက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?” လို့ ညည်းတွားနေကြတယ်။ ညည်းခဲ့ ငြင်းခဲ့ပေမယ့်လည်း နောက်ဆုံးမှာ လူနာနေဖို့ အခန်းကိုစီစဉ်ခဲ့ကြရတယ်။ ဆေးရုံအုပ်ကြီးကိုယ်တိုင် လူနာအတွက် စပ္ပါယ်ရှယ်အခန်းက ကုတင် နံပါတ် (၁၉)ကို ရွေးပေးခဲ့တယ်။ လာဘ်နံပါတ်လို့ ပြောပါတယ်။ နပ်စ်မှူး တာဝန်ခွဲတော့ ကုတင် (၁၉)က လူနာကို ဘယ်သူမှသွားမကြည့်ချင်ခဲ့ကြဘူး။ နောက်ဆုံး ကျောင်းပြီးတာ သုံးလတောင်မပြည့်သေးတဲ့ ကျွန်မ …
နောက်ဆုံးအချိန် မတိုင်ခင် ( ၁၃ ) မိနစ်အလို . . . . .(ရုပ်သံ ကြည့်ရန်) . .
By Aung Aung on Saturday, February 16, 2019
(Zawgyiဖြင့် ဖတ်ရန်) ခါတိုင်းနေ့တွေလိုပါပဲ။ ဒီနေ့က ရာသီဥတုလေး တော်တော်ကောင်းတယ်။ ကောင်းကင်မှာ တိမ်လေးနည်းနည်းရှိနေတာကလွဲလို့ မနက်ခြောက်နာရီရဲ့ ရှုခင်းလေးဟာ တော်တော်လှတာပဲ။ ခရီးသည်တွေနေရာယူတယ်။ လေယာဉ်မှုးတွေရဲ့ before took off announcement ကြေငြာသံကြားရတယ်။ Cabin Crew တွေက safety briefing ပေးတယ်။ အားလုံးအပြီးမှာတော့ Lion Air လေကြောင်းလိုင်းအမှတ်စဉ် ( ၆၁၀ ) ဟာ ဂျာကာတာလေဆိပ်ကနေ ပျံတက်သွားပါတယ်။ လေယာဉ်တစ်စီးလုံး လေထဲရောက်တဲ့အချိန် တစ်ခုခုတော့မှားယွင်းနေပြီဆိုတာ ပိုင်းလော့တွေသတိထားမိကြတယ်။ ထိန်းချုပ်ရေးစခန်း ခလုတ်ခုံတွေကနေ အသံတွေမြည်လာတယ်။ ထိန်းချုပ်ရေးလက်ကိုင်တစ်ခုလုံး လှုပ်ယမ်းလာတယ်။ ဒါဟာ လေယာဉ်တစ်ခုလုံးအတွက် အရေးပေါ်အခြေအနေ ( Critical Condition ) ဆိုတဲ့သတိပေးချက်ပါပဲ။ လေယာဉ်က အပေါ်ကိုထောင်တက်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြင့်ပေတွေ၊ …
ခြူးလေး သီဆိုထားတဲ့ အသဲကွဲသီချင်း “နေပါစေတော့” MV အမြည်းလေး August 17, 2019
MRTV4မင်းသမီးလေးလို့ လူသိများတဲ့ နိုင်ငံကျော် သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးလေး ခြူးလေး ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ သူလေးပါ။ သူမသရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းများစွာ လည်းရှိတာကြောင့် သူမကို ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိုမိုလေးရဲ့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် သရုပ်ဆောင် ခြူးလေး သီဆိုထားတဲ့ အသဲကွဲသီချင်း “နေပါစေတော့” MV အမြည်းလေး ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ခြူးလေးရဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေလည်း မကြာခင် ကြည့်ရတော့မှာပါ။သူမသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ချစ်ရပါသောနွေ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကလည်းပရိသတ်အားပေးမှုများစွာရရှိထားပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ခြူးလေးက အသဲကွဲသီချင်းတစ်ပုဒ်ကို သီဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အသဲကွဲသီချင်း “နေပါစေတော့” MV လေးကို ခြူးလေးက မကြာခင် ပရိသတ်တွေဆီအရောက်ပို့တော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခြူးလေးက ” အမြည်းလေး အရင် ကျွေးမယ်နော် […]
လားရှိုးမြို့နယ် ပန်ဟက်ကျေးရွာအနီး ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားနေ August 17, 2019
■ လားရှိုးမြို့ကနေ မူဆယ်ဘက်အထွက် ၁၂ မိုင်နမ့်တွန်း ပန်ဟက်ကျေးရွာအနီး တောင်ကုန်းကနေ လက်နက်ကြီးတွေ ပစ်ခတ်မှုရှိနေပြီး ဆီဆိုင်တွေမီးလောင်ပျက်စီးနေပါတယ်။ ကြိုကြားကြိုကြားဆိုသလို လက်နက်ကြီးတွေ ပစ်ခတ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Photo: Kan Thar/RFA The post လားရှိုးမြို့နယ် ပန်ဟက်ကျေးရွာအနီး ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားနေ appeared first on Lovely Myanmar.
မပြောမပြီး မတီးမမြည်ဖြစ်လို့ ပြောချလိုက်ပြီ မှားရင် ကြိုးစင်တက်မယ် August 17, 2019
Zawgyi မပြောမပြီး မတီးမမြည်ဖြစ်လို့ ပြောချလိုက်ပြီ မှားရင် ကြိုးစင်တက်မယ် ကျွန်မနာမည်က ခင်ရူပါလွင် ဘုတ်ပြင်း ကရသူရိ ကြား မိုင်တိုင် ၁၇၄/၄ မှာတစ်အိမ်တည်းနေပြီး MCRA/SH ရုံးဆိုင်းဘုတ် ရှိတဲ့အိမ် ကကျွန်မအိမ်ပါ။ တနသာင်္ရီတိုင်းသည် ကျွန်မမွေးရာဇာတိတိုင်းမဟုတ်ပါ ကျွန်မက ကြို့ပင်ကောက်သူ စစ်စစ်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မ တနသာင်္ရီတိုင်း ကိုရောက်တာ (၇)နှစ်ရှိပါပြီ..မှု့ခင်းထဲဝင်တာ ၂ နှစ်ပြည့်ပါပြီ ။ကျွန်မ တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ဌာနဆိုင်ရာ များအမြင်မကြည်ခြင်း၊ ကြေးနန်း အမှားပေးခြင်း၊များ များစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မလုံးဝမည်သူ့ကိုမှ မပြောခဲ့ပါ သက်သေအခုထိရှိပါသေးတယ် ကျွန်မမလုပ်ရက်ခဲ့ပါဘူးကျွန်မအားလုံးကိုနားလည်ပေးပါတယ်။ ကျွန်မ မကြာသေးခင်က ဆင်းရဲသားပြည်သူများအပေါ် ကုမ္မဏီတစ်ခု၏ နိုင်ထက်ပိုင်းမှု့ကို မခံချင်​လွန်းလို့ ရန်ဖြစ်ခဲ့ရာ လူအယောက်၂၀ သံတုတ်များ ပါလာတာကြောင့် ကျွန်မခေါင်းထိသွားခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒိအဖြစ်ပျက်အားပြန်ပြောရင် အဲဒိလူတွေထောင်ကျလား? […]
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီက တည်းခဲ့ဖူးသည့်အိမ်သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်လည်ပါတ် August 17, 2019
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီက တည်းခိုခဲ့ဖူးသည့် နေအိမ်သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်လည်ပါတ် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၁၉၉၀ရွေးကော်ပွဲမတိုင်က ၎င်းတည်းခိုနေထိုင်ဖူးသည့် မန္တလေးမြို့ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်ရှိ ငွေနှင်းဖြူ လက်ဖက်ပွဲရုံသို့ သွားရောက်လည်ပါတ်ခဲ့ပြီး ပွဲရုံပိုင်ရှင် အသက်(၉၄)နှစ်အရွယ် ဒေါ်နှင်းယဉ်အား တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။ မန္တလေးမြို့ ၈၁လမ်း၊ ၃၂လမ်းနှင့် ၃၃လမ်းကြားရှိ ဦးညီပု၊ ဒေါ်နှင်းယဉ်တို့၏ ငွေနှင်းဖြူ လက်ဖက်ပွဲရုံသည် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကာလ စည်းရုံးရေးဆင်းသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD ပါတီဝင်များ တည်ခိုရန် အခက်အခဲဖြစ်နေချိန် အကူအညီပေးကာ တည်းခိုခွင့်ပြုခဲ့သော နေအိမ်ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဦးညီပုနှင့် ဒေါ်နှင်းတို့ ငွေနှင်းဖြူလက်ဖက်ပွဲရုံ၌ ၁၉၈၈၊ ၁၉၈၉နှင့် ၂၀၀၂များတွင် သုံးကြိမ် တည်ခိုနေထိုင်ဖူးသည်။ ထိုသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လက်ခံတည်းခိုခွင့် ပြုခဲ့သည့်အတွက် အာဏာပိုင်များ၏ သတိထားစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ […]
မျက်မှောက်ခေတ်ပညာရေးကို စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း Raatchasi August 17, 2019
လက်တလောမှာတော့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ အရမ်းကိုလူပြောများနေတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားရှိပါတယ်။ဇာတ်ကား နာမည်ကတော့ Raatchasi ပါ။ဒီဇာတ်ကားကတော့ ပညာရေးနဲ့ မကင်းသူတိုင်းကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကား ကောင်းလေးပါ။ကျောင်းဆရာ၊ဆရာမ တွေ ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေ ဆိုရင် ပိုပြီးတော့တောင်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ကိုယ် တိုင်က ပညာရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ယောက်လည်း မဟုတ်ဘူး။ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူလည်း မဟုတ်ဖူး ဆိုရင် ရော ဒီကားကို မကြည့်ရတော့ဘူးလား ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးတော့တောင် ကြည့်သင့်ပါတယ်။ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ပညာရေး စနစ်ဟောင်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အနာဂါတ်မျိုးဆက်တွေကိုပါ ဆက်ပြီး နစ်မွန်းနေတာကို မမြင်ချင်တော့ဘူးဆိုသူတိုင်း ကြည့်ကို ကြည့်ရမယ့်ဇာတ်ကားပါ။ ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ ဒါရိုက်တာ Sy Gowthamraj ကရိုက်ကူးထားတာပါ။တကယ့်ကို အရသာရှိပြီး အနှစ်သာရ ရှိတဲ့ ဇာတ်ကားကို ဖန်တီးပေးခဲ့တာမို့ ဒီဒါရိုက်တာကိုတော့ ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ သရုပ်ဆောင် တွေ အဖြစ် Jyothika၊Aruldoos၊ Hareesh Peradi၊ Poornima Jayaram…အစရှိတဲ့ […]
အကျအဆုံးများမှာဆိုးလို့ ရှော့တိုက်ဒုံးများ မပစ်ပဲ တပ်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်တာပါဟု TNLA အရာရှိဆို August 17, 2019
အကျအဆုံးများမှာဆိုးလို့ ရှော့တိုက်ဒုံးများ မပစ်ပဲ တပ်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်တာပါဟု TNLA အရာရှိဆို သြဂုတ်လ(၁၅) ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပြင်ဦးလွင် နောင်ချို တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွင် ပြင်ဦးလွင်ရှိ တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်တွင် ပစ်ခတ်ရန် စီစဉ်ထားသည့် ရှော့တိုက်ဒုံးများ တွေ့ရှိရကြောင်းသိရသည်။ ၄င်း တိုက်ခိုက်မှုတွင် တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်အပါအ၀င် ပြင်ဦးလွင်နှင့် နောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းရှိ တပ်နှင့် စစ်ဆေးရေးဂိတ်များအား တအာင်းအဖွဲ့(TNLA)၊ ရခိုင်အဖွဲ့(AA)၊ ကိုးကန့်အဖွဲ့(MNDAA) တို့က ပူးပေါင်း တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည်ဦးလွင်မြို့နယ် မြို့ရှောင်လမ်းအနီးရှိ တောင်ကုန်းတစ်ခုတွင် ပစ်ခတ်ရန် စီစဉ်ထားသည့် ဘတ္ထရီရှော့တိုက်ဒုံး များကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များ နယ်မြေရှင်းလင်းစဉ် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုလည်း သိရှိခဲ့ရသည်။ ၄င်း ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး TNLA အရာရှိတစ်ဦးမှ ယခုကဲ့သို ဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ “ကျွန်တော်တို့ ဒီထက်ပိုတဲ့ ပစ်အား သုံးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့[…]
ကြောင်ကလေး ရေနစ်နေတာမြင်တော့ ဝှီးချဲပေါ်က ခက်ခက်ခဲခဲဆင်းပြီး ကယ်ခဲ့တဲ့ သူ August 17, 2019
ပီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ (၁၁)ရက်နေ့က Abu Fathiyyaturahma Menk Abdun Mujtahid အမည်ရ အမျိုးသားဟာ သူ ကြောင်ကလေးကို ခက်ခက်ခဲခဲ ကယ်တင်ခဲ့ပုံ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းကို လူမှုကွန်ရက်မှာ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ Abu ဟာ အများမြင်တဲ့အတိုင်း သူကိုယ်တိုင်က မသန်စွမ်းတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ ခြေထောက်အောက်ပိုင်း ပြတ်တောက်နေသူဖြစ်ပြီး၊ ဝှီးချဲကို မဖြစ်မနေ အသုံးပြုနေရသူပါ။ သူဟာ ကြောင်ကလေးတစ်ကောင် ရေမြောင်းထဲနစ်နေတာ မြင်တော့ ဝှီးချဲပေါ်က ခက်ခက်ခဲခဲဆင်းပြီး၊ မရရအောင် ကယ်တယ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Abu ဟာ မသန်စွမ်း အားကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ သူနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဟာ အားကစားလေ့ကျင့်ဖို့ လေ့ကျင့်ရုံကို သွားရောက်စဉ်မှာ ကယ်သူမဲ့နေတဲ့ ကြောင်ကလေးကို တွေ့ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Abu ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို သူငယ်ချင်းတွေက ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်း […]
ဒီနယ်မြေအတွင်းမှာ နည်းနည်းတော့ကြမ်းမယ်ဗျာ August 17, 2019
ဒီနယ်မြေအတွင်းမှာ နည်းနည်းတော့ကြမ်းမယ်ဗျာ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နောင်ချို မိုးကုတ် မိုးမိတ် မိုင်းလုံ သီပေါ နမ့်မတူ ကျောက်မဲ ဒီနယ်မြေအတွင်းမှာ နည်းနည်းတော့ကြမ်းမယ်ရမ်းကားတာမဟုတ်လွမ်းစရာစကားတွေလာမပြောနဲ့ စစ်သား တာဝန်ချိန်မှာစစ်ဆင်ရေးကာလမှာ မလွမ်းတတ်ဘူးနောက်နေ့အာရုံအတက် နေအထွက်မှာ ခွေးအသေကောင် /ခွေးအရှင်ကောင် ဘယ်နစ်ကောင်ရမလည်းကြည့်ထားတရုတ်ပြည်မကူးဘို့ ကအဓိက။ Credit to Heinn Htet အခု ညနေ ၄း၀၀ အချိန်အထိ မိမိဘက်မှ တပ်မတော်(၁+၉)နဲ့ ရဲ(၁+၃) ကျဆုံးခဲ့ပါတယ် ရန်သူလက်ချက်ဖြင့် အရပ်သား (၉) သေဆုံး ခဲ့ပါတယ် ရန်သူဘက်မှ (၆၇) လောင်း ရရှိပြီးဖြစ် ဆက်လက် ပိတ်ဆို့ ချေမှုန်းနေဆဲပါ စုစုပေါင်း ရန်သူအင်အား (၈၀၀)ခန့်အထိ ရှိနိုင်ပါတယ် (၃၅၀)ကျော်အား နောင်ချိုနယ်ထဲမှာ ပိတ်ထားလိုက်ပါပြီ ။ Credit to ကျော်ဆွေ […]
ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်များ၏ ရုပ်ကလပ်များကို မိခင်တပ်ရင်းသို့ပြန်လည် သယ်ဆောင် August 17, 2019
ဂုတ်တွင်းရဲကင်းစခန်း တွင် ကျဆုံးသွားသောစစ်သည်များ ၏ ရုပ်ကလပ်များကို မိခင်တပ်ရင်းသို့ပြန်လည် သယ်ဆောင်… ၂၀၁၉ ၊ သြဂုတ်လ- ၁၆ ရက်။ ရှမ်ြး ပည်နယ်ြေ မာက်ပိုင်း နောင်ချြို မို့နယ် ဂုတ်တွင်းရဲကင်းစခန်း တွင် လုံခြုံရေးတာဝန်များဆောင်ရွက်နေကြသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရတခလရ (၂၅၃) တပ် မှ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တို့အား သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ဝ၅:၃၀ ချိန်ခန့် တွင် TNLA , AA , MNDAA , SSPA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့မှ ပူးပေါင်းအင်အား အလုံးအရင်းဖြင့်ဝင်ရောက်စီးနင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲစဉ် ကျဆုံးသွားခဲ့ကြသောရုပ်ကလပ်များအား ယနေ့မနက် ၀၉:၃၀ ချိန်တွင် နောင်ချိုမြို့လူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့များမှသယ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်း သိရ ။ ကျဆုံးသွားကြသော စစ်သည်များမှာ အမှတ် (၁၀၁) တပ်မှဌာနချုပ်လက်အောက်ခံ အမှတ် (၂၅၃) […]
တပ်မတော်ကို စိန်ခေါ်တိုက်ခိုက်သည့်အတွက် တပ်မတော်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လိမ့်မည် August 17, 2019
ပြင်ဦးလွင်မြို့က တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ နောင်ချိုနဲ့ကျောက်မဲမြို့တွေက စစ်ဆေးရေး ဂိတ်တွေကို ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့က တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက် တပ်မတော်သားနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ တပ်မတော်ဘက်က တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ပေးဖို့ မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့က ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အခုလို တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတာပါ။ ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့် တပ်မတော်အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုတွေပိုပြီး တိုးလာမလား၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အလားအလာတွေ ဘယ်လိုရှိနိုင်မလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး RFA ဝိုင်းတော်သား ကိုရဲစည်သူကာက တင်ပြပါလိမ့်မယ်။ ရုပ်သံကြည့်ရန် အောက်တွင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်Credit to RFA BURMESE Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် တပျမတျောကို စိနျချေါတိုကျခိုကျသညျ့အတှကျ တပျမတျောရဲ့တိုကျခိုကျမှုက ပွငျးပွငျးထနျထနျဖွဈလိမျ့မညျ ပွငျဦးလှငျတိုကျခိုကျမှုနဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးအလားအလာ ပွငျဦးလှငျမွို့က တပျမတျောနညျးပညာတက်ကသိုလျ၊ နောငျခြိုနဲ့ကြောကျမဲမွို့တှကေ စဈဆေးရေး ဂိတျတှကေို ပွီးခဲ့တဲ့ သွဂုတျလ ၁၅ […]
ဒီနေ့ စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ရင် ဒီနေ့ စစ်ထဲဝင်မယ် (ဆရာမင်းဒင်)
လက်နက်ကြီးထိပြီး ကွယ်လွန်သွားတဲ့ လာရှိုးလူငယ်ဥက္ကဠအတွက် ကျော်သူရဲ့ ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်း
လူသူမသိ ညဘက်လမ်းမပေါ်မှာ အဆိုတော် စောလားထော်ဝါး ရဲ့ ပကာသနမပါတဲ့ အလှူတစ်ခု
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တိုက်ပွဲပြင်းထန် ၊ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ပစ်ခတ်